निन्जा खेल खोज्नुहोस् - अनलाइन
48 लागि परिणाम ninja games
बेन 10 बनाम निन्जा
उहाँलाई मार्न र जीवित रहन आफ्नो कौशल प्रयोग गर्न खोज्नु भएको निन्जा विरुद्ध मदत बेन 10 लडाई। लड्न वा सार्न कुञ्जीहरू तीर प्रेस एक्स, सी।
निंजा कछुए रेसिंग। यसको कछुए रेसिंग समय। तपाईंको कछुए विरोधियों को बिरुद्ध चार कछुए र दौड मध्ये एक को चयन गर्नुहोस र उनलाई हरायो। आफ्नो बाइक घुमाउनुहोस् जसलाई छिटो र प्रत्येक दौडमा पहिले समाप्त गर्नुहोस्।
निंजा कछुए ग्याँस बाइक
निंजा कछुआ पछाडी तर यो समय गंदगी बाइकमा। उहाँले कौशल पाउने पछि विभिन्न स्टन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। भाग्यले साथ दिओस्!
रत्न सम्म ninjago
यो खेल श्रृंखला Ninjago खेल मध्ये एक छ। काई गुफाको मुखमा रकेट पुस अप प्रयोग गरिएको छ गुफा बाहिर प्राप्त गर्न एक तरिका छ, तपाईं काई यस्तो चट्टानहरु रूपमा अवरोध fly.Note थप ऊर्जा प्राप्त गर्न हीरे सङ्कलन सहयोगका मा रूखहरू, गुफाको हराएको
एक्शन खेल निन्जा गेममा तपाईको मित्रले दुष्ट व्यक्तिहरूद्वारा पक्रिएको छ। जानुहोस् र उनको महल पत्ता लगाउनुहोस् र सबैलाई हटाउनुहोस् जसले तपाईंलाई रोक्न खोज्छ!
निन्जा चित्रकला 2
निन्जा ताराहरू र अन्य वस्तुहरूले चित्रकारहरूको काम एकत्र गरे। तिनीहरू रङहरूमा रहेका रङ्ग महलका सबै खण्डहरू ढोका खोल्न पाउँछन्।
निन्जा डोजो देखि नियमित भाग्ने शो
Ninjas मा Rigby सुरुवात र भिडियो गेम उहाँलाई उद्धार! प्ले पर्छ!
निन्जा केटी माथि पोशाक
तपाईं एउटा सुन्दर तर stealthy निन्जा केटी हो। आफ्नो मनपर्ने हतियार छान्न र त्यसपछि केही कडा प्रशिक्षण लागि Dungeons बाहिर टाउको!
फल समुराई अनलाइन
क्रोध, फल खेल काट! खेल तपाईंलाई योद्धाहरु को आँखा को रोगहरु को अवतार को आवश्यकता छ चाकू अवसर र स्थिरता को गुजारें सटीक पनि एक उच्च स्कोर प्राप्त गर्न को लागि कटौती!
निन्जा निन्जा भ्यागुतो kaeru को खेल मा दुष्ट चुडैल सम्म एक राज्य को एक राजकुमार तिनलाई ठूलो निन्जा भए जो पछि, Sapo मा उहाँलाई खोल्दै मा एक हिज्जे डाली र अब हिज्जे तोड्ने र फर्कन आफ्नो मिशन पूरा गर्न खोजिरहेका हुनेछ थियो को Pri
निन्जा कछुवा बाइक
यो निन्जा कछुवा आफूलाई, बाहिर टाउको सडकमा मारा र हेर्न तपाईं अवरोध भन्दा प्राप्त गरेर स्तर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भने नयाँ सवारी मिल्यो!
निन्जा कछुवा डबल ड्रेगन
को निन्जा कछुवा स्तर पारित गर्न सबै शत्रुहरू हटाउन मद्दत गर्नुहोस्। तपाईं चयन गर्न को लागि धेरै कौशल हो। भाग्यले साथ दिओस्!
निन्जा र अन्धा केटी
एक सुपर नायक निंजा हुनुहोस् र अन्धा केटीलाई सबै घाटीबाट बचाउनुहोस्।
ड्रैगन हत्यारा पृथ्वी मा प्रकट भएको छ। केवल तकीशीले गंदा निन्जाले उसलाई पराजित गर्न र संसारलाई बचाउन सक्छ।
यो पहेली खेल निन्जा वितरण तपाईं एक मिशन छ कि एक राम्रो तालिम stealthy निन्जा छन्। कि तपाइँको अर्को गाउँमा बस्छ मास्टर एउटा प्याकेज वितरण।
निन्जा दौड चलाउनुहोस्
तपाईं आफ्ना शत्रुहरूलाई बचाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। दायाँ घुमाउनुहोस्, स्लाइड गर्नुहोस् र आक्रमण गर्नुहोस्। तपाईंको कुञ्जीहरू परीक्षण गरिनेछ।
यो शहरको सडकमा साँच्चै धेरै खतरनाक छन्। जनसंख्याको गिरोह र आतंककारी समूह को कार्यहरू देखि पीडित। लामो र घन्टी बीच चयन र टुक्रा मा मालिक banditry जसले यो देखाउँछ। एक कठिन र जोखिमपूर्ण प्रदर्शन गर्न। बचत
निन्नुको पछाडि हो तर यो समय मोटरसाइकलमा। सीवरको माध्यमबाट सवारी गर्नुहोस् र अन्त्यमा पुग्न प्रयास गर्नुहोस्। होस् गर!
निन्जा कुत्तों द्वितीय खेल
ठूलो दुष्ट पहेंलो बिरालो अनमोल गोप्य पाण्डुलिपिका चोरेछ। हाम्रो NinjaDogs नयाँ चरित्र, मास्टर कुकुर संग, पाण्डुलिपिका पाउन अब मद्दत गर्नुहोस्। सुविधाहरू4नयाँ दृश्य कथा, 1 नयाँ कुकुर, 45 नयाँ स्तर र नयाँ पृष्ठभूमिका।
बनाम समुद्री Ninjas td 3
यो फिर्ता छ! नयाँ वाहन चयन, संसारको सबैभन्दा खतरनाक शहर र शहरी jungles मा तबाही को कारण! झटका ट्रक, फ्लिप फिर्ता गर्न, वा घडी रेस!
यसको असाधारण पाङ्ग्रा संग, rigdon बाइक बाटोमा चलाउनु एक विशेष बाइक छ। वास्तवमा हाम्रो biker अस्थिर सडक मार्फत यो ड्राइव गर्नेछन्।
मारियो एक बास्केटबल सुटआउट गर्न चुनौती र बस भन्दा एक मिनेट मा धेरै अंक स्कोर गर्न आवश्यक छ। Goombas देखा र आफ्नो शट ब्लक गर्न प्रयास गर्नुहोस्, तर आफ्नो मदत मारियो तिनीहरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं .. तिमी .. दिन्छ रेफरी बर्खास्त र आफ्नो 45 उपलब्धिहरू प्राप्त क्रोधित महसुस कुनै एक रातो card..oh पायो।
शहर संक्रमित र त्यहाँ लाश जताततै छन् भइरहेको छ। आफ्नो मिशन तिनीहरूलाई छुटकारा पाउन र रूपमा लामो तपाईं गर्न सक्छन् बच्न छ। , Recharge। स्पेस बार गर्न गोली तपाईँको माउस प्रयोग